ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးအလုပ်အမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းအော်ရီဂွန်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 877-959-6717 နောက်ဆုံးမိနစ်လေယာဉ်တင်အချည်းနှီးသောခြေထောက်ပျံသန်းမှုကိုးကားဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ဧရိယာစီးပွားရေးများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်? သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
သငျသညျပျံသန်းဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ, လက်ျာလေကြောင်းလိုင်းရွေးချယ်ရာတွင်အမြဲအရေးကြီးသည်. ယနေ့တွင်, အပတ်တိုင်းသူတို့ရဲ့ပျံအတွေ့အကြုံနှင့်အတူမပျော်နေသောခရီးသည်များ၏အခြားကြောက်ခမန်းလိလိအကောင့်လည်းမရှိလိုပုံရသည်. ဒါကြောင့်ည TSA မှာရှည်လျားလိုင်းများရဲ့ရှိမရှိ, လွဲချော်ပျံသန်းမှု, ရိုင်းစိုင်းခရီးသည်, အရမ်းတောင်းဆိုခံရဖို့ပုံတစ်ခုသို့မဟုတ်လေယာဉ်အမှုထမ်း, အဆိုပါပျံသန်းအတွေ့အကြုံကိုများစွာသောလူတို့အတွက် ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာ. ထို့အပြင်, ကြောင်းပုံမှန်လေကြောင်းလိုင်းများလက်ရှိအဆိုပါကူညီပြီးသားအပေါင်းတို့နှင့်အတူ, တစ်ချိန်က onboard, သငျသညျဖွယ်ရှိဒါကြောင့်သင်ခဲရွှေ့နိုင်ပါတယ်အတူတကွပြည့်ကျပ်နေအောင်ထည့်ဖြစ်ကြောင်းထိုင်ခုံနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ပါလိမ့်မယ်. ကံကောင်းစွာ, သငျသညျရှေးခယျြစရာရှိဘူး.
တစ်ခုကအော်ရီဂွန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှစ်သိမ့်၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာကိုရနေတဲ့အကြီးအလမ်းနိုင်ပါတယ်. သင်မကြာခဏရန်ပွဲကြိမ်အဖြစ်ရပ်နားနှင့်စပ်လျဉ်းပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်, သင်သည်သင်၏တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်ပျံသန်းအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကြိုက်ကူညီနိုင်သည့်. အော်ရီဂွန်ရှိငှားတစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ရိုးရှင်းစွာသင်သည်အစဉ်အစဉ်အလာကိုစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ထက် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ပံ့. ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပြင်, သင်သည်သင်၏ပျံသန်း သာ. ကွီးမွတျနှစျသိမျ့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်. သင်ပိုမိုခြေထောက်အခန်းတစ်ခန်းရှိသည်လိမ့်မယ်, တစ်ဦးထက်ပိုစိတ်အေးလက်အေးလေထု, ပိုပြီးအိတ်ယူဖို့နဲ့စွမ်းရည်, လိုအပ်ခဲ့လျှင်. ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားပျံလည်း ပို. တတ်နိုင်များစွာသောလူစိတ်ကူးထက်နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျအစဉျအမွဲသိချင်တော့ပါလျှင်, ငါ့ကိုအနီးရှိနောက်ဆုံးမိနစ်လေယာဉ်တင်အချည်းနှီးသောခြေထောက်သဘောတူညီချက်၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလုပ်နေလဲ? သင်တစ်ဦးအားရစရာဘို့အတွက်ပါပဲ. ဤနောက်ဆုံးမိနစ်အပေးအယူမကြာခဏပုံမှန်အတိုင်းလျှော့ချပါပြီ, သင်မူကားတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားတွေနဲ့ရင့်သောတူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံး. လေကြောင်းလိုင်းမွို့သို့ခရီးသည်ပျံလိုက်တဲ့အခါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့အိမ်ကလေဆိပ်မှပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်မရှိသောခရီးသည်များရှိ, သူတို့မကြာခဏဒီဗလာခြေထောက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြည့်နိုင်ရန်အတွက်လျှော့ပုံမှန်အတိုင်းပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်ဤခရီးစဉ်များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏အချိန်ဇယားနှင့်အတူကိုက်ညီသောတဦးတည်းကိုရှာဖွေလျှင်ပိုက်ဆံအများကြီးကယ်တင်.
အယ်လ်ဘာနီ, OR Eugene, OR Lake Oswego, OR လမ်, OR
Corvallis, OR Keizer, OR လက်ပံ, OR West Linn, OR
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝါရှင်တန် | အချည်းနှီးသောခြေထောက်ဂျက်စင်းလုံးငှားလက်ပံ